Zviri nyore Sei Kuita Bhizinesi Newe Pamhepo? | Martech Zone
Zviri nyore Sei Kuita Bhizinesi Newe Pamhepo?
Chishanu, June 26, 2009 Douglas Karr
Anenge mazuva ese ini ndinowana zvinongedzo kune zvigadzirwa kana masevhisi epamhepo uye zvakandiomera kuti ndiwane zvandinoda kana kufamba kuenda kwandinoshuvira kuenda. Zvinoshamisa kwandiri kuti zvakaoma sei mamwe makambani kuvaka mawebhusaiti avo. Ini ndingaite bhizinesi nenzvimbo zhinji dai vasina kuzviita zvakanyanya kutadza!
Ini ndakango gadzira iyo nzira yese kuburikidza neakawanda-mafomu maitiro pane saiti maminetsi mashoma apfuura kungoziva kuti ini ndaifanirwa kuve ndakanyoreswa mushandisi kushandisa saiti. Pandakanyora, zvese zvandakanga ndasarudza zvadzimwa. Handisi kudzokera shure! Panzvimbo pekutaura nezve ese masosi anotyisa, ini ndinobata pane iyo iyo akaita shanda zvakaringana pachinzvimbo!
Nezuro ndakanga ndichirwara nemusoro unotyisa wemagraine. Ini ndakanyatso kushushikana nguva pfupi yadarika - ndiri kutenderedza kuzvipira kwakawanda uye hupenyu hwangu / basa kutenderera rave dambudziko hombe. Iniwo handisi kudya zvakanaka uye kukanda mamwe mapaundi asina kudikanwa. Shamwari dzinoverengeka dzakatambanudza ruoko ndokundiudza kuti inguva yekuita chimwe chinhu nezvazvo. Handifarire kuenda kumachiremba, saka ndiri kutsvaga dzimwe nzira.
Mukati memaminetsi ekutumira nezve yangu migraine pa Twitter, ndakagamuchira inotevera tweet kubva Kuporesa Kiyi:
Ndakafamba kuenda ku Kuporesa Kiyi saiti, verenga zvimwe zvepawebhusaiti, uye akafara kwazvo kuti paive ne online scheduler (pamusoro pe peji rega rega!). Ndakatarisa purogiramu yangu uye zvino ndine musangano wekutanga naCheryl akarongerwa Mugovera mangwanani. Aya ndiwo mashandisiro anoita saiti yako. Ndizvo?
Tags: internet yekutengesa muteromobilenomicsmupepanhau
Microsoft Inokumbira Google Kutora Yakabatana Email Musika
Maitiro Ekutanga Iyo Yakabudirira Kambani
Jun 26, 2009 pa 3: 22 PM
Zvinotapira. Ini ndakabhuka musangano wangu naOssip's paDenderedzwa mavhiki mashoma apfuura online. Zvaive nyore uye zvisingarwadze, uye hazvina kuda kuti ini nditaure nemunhu. Ini ndiri dork, saka ini handifarire kutaura nevanhu vandisingazive. 🙂
Jun 26, 2009 pa 11: 17 PM
Ini ndanyora akati wandei zvinyorwa mumutsara uyu, senge "Sei KUTI uwane mutengi: Zvishanu zvakajairika zvekushambadzira zvikanganiso" Ini handizosvibise zvaunotaura pano nehukama, asi hazvisi mune yangu disqus yakanyorwa webhusaiti (ndiani ane webhusaiti imwe chete? )